MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): November 2005
SMS to Myanmar GSM
Posted by MgHla Mandalay at 8:29 am
Written by MgHla & Zeng
မြန်မာနိုင်ငံက gsm ဖုန်းတွေဆီကို sms ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် www.yangoncity.com.mm ကနေ ပို့လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၄င်း website မှာ member ၀င်ထားသူများသာလျှင် ပို့လို့ရပါတယ်။ လတ်တလော ၄င်း website မှာ register လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့http://utility.mcc.com.mm မှာ register လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိတော့ အသင်းဝင် ထားရင် တစ်နေ့ကို sms ငါးစောင် အခမဲ့ ပို့လို့ ရပါတယ်။
account ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ http://www.yangoncity.com.mm ကိုဝင်ပြီး XChat to SMS ဆိုတဲ့ ပုံကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် XChat New windows ပေါ်လာပြီး login လုပ်ခိုင်းလိမ့်မယ်။ username & password type ပြီး login လုပ်ပြီးတဲ့အခါ nickname တစ်ခုနဲ့ chatroom ထဲကို ၀င်ခိုင်းလိမ့်မယ်။ chatroom ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ အောက်နားက စာရိုက်တဲ့နေရာနားမှာ mobile SMS (beta version) ဆိုတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်တဲ့ဖို့ box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီး login လုပ်လိုက်ရင် ရပြီ။ ပြောချင်တဲ့စာကိုသာ ရိုက်ထည့်ပြီးပြောပေတော့။ ကိုယ့်ဆီကိုပြန်ဝင်လာတဲ့ message တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ chat room ဘေး userlist ထဲက ကိုယ့် nickname ဘေးမှာ View SMS ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ်ပို့ထားတာတွေရယ်၊ကိုယ့်ဆီ ပြန်ဝင်လာတဲ့ဟာတွေရယ် တွေ့ရလိမ့်မယ်။ တစ်ရက်ကို ငါးစောင်ပြည့်သွားရင် ထပ်ပို့လို့မရတော့တာမို့ ချွေချွေတာတာလေး အသုံးပြုပေါ့ခင်ဗျာ။ ပြည်တွင်းကော၊ ပြည်ပကပါ အဆိုပါ website ကို ၀င်ပြီး SMS ပို့နိုင်ပါတယ်။
This post requires to view ZawGyi-One Myanmar Unicode Font.
က္လတော် ရကိက်ြတဲ့ မ္လြိးက္လော့နမိငြ်
Posted by MgHla Mandalay at 8:49 am
ကိုမ္လြိးက္လော့နမိင်ြကို က္လတော် သီခ္လင်းတေ့ စနပီး နားထောင်တတ် အရ့ယ်က စနပီးရကိက်ြခဲ့တာပြ... သီခ္လင်းတေ့ စနားထောင်တဲ့ အခ္လိန်တုန်းက ခေ့ဝယ်စရာ ပိုက်ဆံမရဋ္ဋိသေးတဲ့ အရ့ယ်ဆိုတော့ ခေ့ဆိုင်က ငဋ္ဋားနပီး နားထောင်ရတာပြေ့ဗ္လာ... ပထမဆုံးငဋ္ဋားနပီး နားထောင်တဲ့ အခေ့က "မိုးတေ့ရ့ာနေခ္လိန်ခဏ" တဲ့ စနားထောင်တုန်းကတော့ ဘာတေ့ ဆိုနေမဋ္ဋန်းလည်း မသိပဘြူး... နားထောင်ရင်း နားထောင်ရင်း နဲဿ သီခ္လင်းတော်တော်မ္လားကို ရကိက်ြလာတယ်...
က္လတော် ပထမဆုံးဝယ်နပီး နားထောင်င်္ိဖစ်တဲ့ အခေ့က "Virus III" အခေ့ဗ္လ... အဲဒီခေ့ကို က္လတော် တော်တော်လေး ရကိက်ြတယ်... A side စစခ္လင်းက လေးင်္ိဖြ ၊ ဇော်ဝင်းထ့ဋ်တိုဿနဲဿ တဲ့ဆိုထားတဲ့ "Rap 'n' Roll" သီခ္လင်းကို အရကိက်ြဆုံးဗ္လာ... B side စစခ္လင်းက စိန်လ့င်ရှဲ သီခ္လင်းကို remix လုပ်နပီး င်္ိပန်ဆိုထားတဲ့ သီခ္လင်းကိုလည်းရကိက်ြတယ်ဗ္လာ... အဲဒီ ခေ့ထဲက သီခ္လင်းတေ့ အကုန်လုံးကို ရကိက်ြတယ်ဗ္လာ...
အခု အခ္လိန်ထိ ကိုမ္လြိးက္လော့ရှဲ သီခ္လင်းခေ့တေ့ထဲမဋ္ဋာ က္လတော် မရိုြးိုင်အောင် နားထောင်နေတဲ့ အခေ့က ကိုဒိုးလုံးနဲဿတဲ့ထုတ်ထားတဲ့ "စားသုံးင်္ီကည့်" ဆိုတဲ့အခေ့ပဲဗ္လာ... မဋ္ဋတ်မိသေးတယ်ဗ္လာ... က္လတော်တိုဿ သူငယ်ခ္လင်းဋ္ဋြစ်ယောက် ခေ့သ့ားဝယ်င်္ီကတာ... က္လတော့်သူငယ်ခ္လင်းက --- ဗင်ဆင့်ရှဲငဋ္ဋက်မ္လား --- ဆိုတဲ့ အခေ့ကို ၀ယ်တယ်... က္လတော်က --- စားသုံးင်္ီကည့် --- ခေ့ကိုဝယ်တယ်... အဲဒီတုန်းက ဒိုးလုံးဆိုတာ တစ်ခမြဋ္ဋ င်္မီကားဖူးသေးဘူး... ကိုမ္လြိးက္လော့ပတြယ်နဲဿ ၀ယ်တာဗ္လ...
စစခ္လင်း နားထောင်တော့ ဘာတေ့မဋ္ဋန်းကို မသိဘူးဗ္လာ ... Alternative သီခ္လင်းတေ့ နားမဋ္ဋ မထောင်ဘူးတာကိုးဗ္လ... အင်း နားထောင်ရင်း နားထောင်ရင်းနဲဿ င်္တိဖည်းင်္ိဖည်း ရကိက်ြလာတာ အခုအခ္လိန်ထိ မရိုြးိုင်ဘူး င်္ိဖစ်နေတယ်... ဒီခေ့နောက်မဋ္ဋ ထ့က်တဲ့ က္လတော့်နာမည် မ္လြိးက္လော့နမိငြ် တိုဿ၊ လူင်္ိဖစ်ရတဲ့ဒုက္ခ တှိုကို အခု သိပ်မရကိက်ြခ္လင်တော့ဘူး... တခတြလေမဋ္ဋပဲ နားထောင်င်္ိဖစ်တယ်...
တော်နပီဗ္လာ စိတ်ကူးတည့်ရာ ရေးနပီးနပီး ...
ကိုမ္လြိးက္လော့ရှဲ ကိုယ်ပိုင် web site ကို ရဋ္ဋာ မတှေ့မိသေးဘူးဗ္လ... ပလန်းနက်က ရေးထားတဲ့ ကိုမ္လြိးက္လော့ site ကိုတော့ ရကိက်ြတယ်ဗ္လာ သ့ားင်္ီကည့်င်္ီကည့် ပြဦး http://www.planet.com.mm/music/artist.cfm?a=mkmyaing&action=bio
ဗုဒဍ္ဍဘာသာရှဲ နိဗ္တာန် အငေ်္ီကာင်း ဆေ့ြးေ့းင်္ိခင်းသိုဿ
Posted by MgHla Mandalay at 9:05 am
စားကောင်း သောက်ကောင်းတေ့ စားရရင် မိတ်ဆေ့ တေ့ကို သတိရတာ သဘာဝပပြဲ... ခုလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ အငေ်္ီကာင်း အရာလေး တစ်ခုကို ဆေ့ြးေ့းနေတာ တှေ့လိုဿ လမ်းည္တွန်ပရြစေ...
ဗုဒဍ္ဍဘာသာရှဲ နိဗ္တာန် အငေ်္ီကာင်း ဆေ့ြးေ့း င်္နေီကတာပြ... ဖတ်ရ႙ ခ္လင်တယ် ဆိုရင် BaganNET Forum မဋ္ဋာ ပညာရဋ္ဋင်မ္လား ဆေ့ြးေ့း င်္နေီကတဲ့ topic တစ်ခု ရဋ္ဋိပတြယ်... http://www.bagan.net.mm/forums/display_topic_threads.asp?ForumID=26&TopicID=10705&PagePosition=1&ThreadPage=1 ဒီလင့်လေးကို click ခေက်ြနပီး သ့ားဖတ်င်္ီကည့်ပြဦး... စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင်တော့ BaganNET Forum မဋ္ဋာ register လုပ်နပီး လ့တ်လပ်စ့ာ ၀င်ရောက် ဆေ့ြးေ့ြးိုင်ငေ်္ီကာင်းပြ...
ဒ-ဒေ့း ပေအြောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ... ဆိုတာ မသိသူတေ့ အတ့က် ...
Posted by MgHla Mandalay at 8:58 am
Microsoft Word မဋ္ဋာ ‘ဒ’ တိုဿ ‘ဓ’ တိုဿ ရိုက်ရင် မပေတြဲ့ င်္ိပသနာမ္လြိးတှေ့ င်္မီကာခဏ ရကြံဘူးမဋ္ဋာပြ … အခု ဒီင်္ိပသနာကို ဘယ်လို ငေ်္ိဖရဋ္ဋင်း ရမလဲဆိုတာကို အဆင့်လိုက် ရေးသ့ားပေးပြ့မယ် …
1. Microsoft Word ထဲဝင်ပြ …
2. Tools > AutoCorrect Options ကို ရေ့းခ္လယ်ပြ …
3. AutoCorrect Options Dialog box ပေလြာရင်
4. “AutoFormat As You Type” tab ကို Click လုပ်ပြ … “Straight Quotes” with “Smart Quotes” ရှဲ ရေဋ္ဋှမဋ္ဋာ ရဋ္ဋိတဲ့ Check Box ထဲမဋ္ဋာ အမဋ္ဋန်င်္ိခစ်ရဋ္ဋိ နေရင် click ခေက်ြနပီး င်္ိဖတ်ြလိုက်ပြ …
5. နောက်ထပ် “AutoFormat” tab ပြေ Click လုပ်ပြ … အဲဒီထဲက … “Straight Quotes” with “Smart Quotes” ရှဲ ရေဋ္ဋှမဋ္ဋာ ရဋ္ဋိတဲ့ Check Box ထဲမဋ္ဋာ အမဋ္ဋန်င်္ိခစ်ရဋ္ဋိ နေရင် လည်း င်္ိဖတ်ြလိုက်ပြဦး…
6. နပီးနပီလား နပီးရင် OK ကို Click လုပ်လိုက်ပြ …
င်္ိမန်မာ ယူနီကုတ် စာလုံးသုံးမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီင်္ိပသနာတှေ့ရမဋ္ဋာ မဟုတ်တော့ပဘြူး ... ဘာင်္ိဖစ်လိုဿလဲ ဆိုတော့ ယူနီကုတ်စာလုံး မဟုတ်တဲ့ င်္ိမန်မာ စာလုံးမ္လားမဋ္ဋာ ဒ ဟာ ' (single quote) နေရာမဋ္ဋာ ရဋ္ဋိနပီး ဓ ဟာ " (double quote) နေရာမဋ္ဋာ ရဋ္ဋိနေလိုဿပပြဲ...
Gtalk မဋ္ဋာ င်္ိမန်မာလို ရိုက်ရအောင်
Posted by MgHla Mandalay at 4:26 pm
ဇော်ဂ္လီ င်္ိမန်မာ ယူနီကုတ်ဖောင့်ရဋ္ဋိမဋ္ဋ အောက်ဖော်င်္ိပပြ post ရဋ္ဋိ စာမ္လားကို အဆင်ငေ်္ိပငေ်္ိပ ဖတ်ရ႙ြိုင်ပလြိမ့်မယ်
ဂျီတော့လ်ခ်နဲ့ မြန်မာလိုရေးနိုင်ပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ တကယ်ပြောတာပါ။ အမှန်ကတော့ ဧရီယယ်ဖောင့်ကို ဟက်လုပ်လိုက်တာပါ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က သူ့ ဧရီယယ်ဖောင့်ထဲမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘာသာစကားတွေ ထည့်ထားပြီး မြန်မာစာကိုမှသာ မထည့်ပေးသေးတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီလို နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖောက်ထွင်းသုံးနေရပါတယ်။ ဒီဖောင့်ဟက်ကို ထည့်သုံးမယ်ဆိုရင် သတိပေးချင်ပါတယ်။ ဧရီယယ်ဖောင့်ဆိုတာ system ဖောင့်တစ်ခုပါ။ သိပ်အရေးပါပါတယ်။ ၀င်းဒိုးစ်၊ ၀က်ဘ်စာမျက်နှာတွေ အတော်များများမှာ သုံးထားပါတယ်။ အခု ဧရီယယ်+ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ထည့်လိုက်ရင် (၁) စာကြောင်းတွေ အနည်းငယ် ကြဲသွားပါမယ်။ (၂) စာလုံးအကွာအဝေး ကတော့ သိပ်မသိသာပါဘူး။ (၃) တစ်ခြားမတွေ့ရသေးတဲ့ ပြဿနာ ပေါင်းစုံနဲ့ တွေ့ကြုံနိုင်တယ် ဆိုတာကို ကြိုတင် သတိပေးပါတယ်။ ဒါကိုမှ လုပ်ချင်သေးသပဆိုရင်တော့ အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းလုပ်သွားပါ။ ၁။ လက်ရှိ ဧရိယယ်ဖောင့် (Arial.ttf) ကို C:\_Windows\_Fonts folder ထဲက ကူးယူပြီး အရံသိမ်းထားပါ။ ၂။ (မလုပ်ဖြစ်မှာစိုးလို့) - လက်ရှိ ဧရိယယ်ဖောင့် (Arial.ttf) ကို C:\_Windows\_Fonts folder ထဲက ကူးယူပြီး တစ်နေရာမှာ အရံသိမ်းထားပါ။ ၃။ ဧရီယယ်ဖောင့်ကို သုံးနေတဲ့ ၀က်ဘ် browser တွေ၊ တစ်ခြား ပရိုဂရမ်တွေ၊ ဂျီတော့လ်ခ် စတာတွေကို ပိတ်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ Desktop ကပါသုံးနေတယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေကိုလည်း ပြောင်းဖို့လိုမယ်။ ၄။ C:\_Windows\_Fonts folder ထဲက (Arial.ttf) ကို ကူးယူပြီးဆိုရင် (Arial.ttf) ကို delete လုပ်ပါ။ delete လုပ်လို့ မရရင် ဖွင့်ထားတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုခုက ဧရီယယ်ကို သုံးနေပါသေးတယ်။ စက်ကိုပိတ်ဖွင့်လုပ်ပါ။ ၅။ ဒီနေရာကနေ ဧရီယယ်+ဇော်ဂျီကို ရယူပါ။ ကီးဘုတ်ဖိုင်တွေလည်း မရသေးဘူးဆိုရင် ယူပါ။ ဖောင့် - (http://www.planet.com.mm/fonts/arizawgyi.zip) ကီးဘုတ် - (http://www.planet.com.mm/fonts/zawgyi_keyborad_layout.zip) ၆။ ရရှိလာတဲ့ ဇစ်ဖိုင်ကို ဖြေချပြီး ထွက်လာတဲ့ ဧရီယယ်+ဇော်ဂျီဖောင့်ဖိုင် (ttf extension) ကို C:\_Windows\_Fonts folder ထဲ ကူးထည့်ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ၀င်းဒိုးစ်ရဲ့ ဧရီယယ်ဖောင့်ဟာ ပြောင်းသွားပါပြီ။ မြန်မာကီးဘုတ်ကိုလည်း သွင်းလို့ရတယ်ဆိုရင် ဂျီတော့လ်ခ်ကိုသာ ဖွင့်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုပါ ရေးပါတော့။ တစ်ဖက်သားကလဲ ဒီဖောင့်ကို ရှိထားရပါမယ်။ မရှိရင်တော့ လေးထောင့်ကွက်။ ကီးဘုတ်တွေ မသွင်းတတ်ဘူး၊ မပြောင်းတတ်ဘူးဆိုရင် နောက်လုပ်နိုင်တာတစ်ခုက ဖိုရမ် စာရေးတဲ့ ဖောင်စာမျက်နှာကို ဖွင့်ထားပြီး အဲဒီထဲမှာ မြန်မာလို ရိုက်ထည့်၊ အဲဒီစာတွေကို ကော်ပီကူးပြီး ဂျီတော့လ်ခ်ထဲ ကူးထည့်လို့ ရပါတယ်။ ပိုတော့ အလုပ်ရှုပ်သလိုရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချစ်ရသူ/လိုက်ရသူက စောင့်နေရင်တော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ လုပ်ပေးရမှာပေါ့။
Posted by MgHla Mandalay at 1:14 pm
Myanmar Unicode Font သုံးထားရင် ဖိုင်နာမည်တေ့၊ folder နာမည်တေ့ကို င်္ိမန်မာလိုရော English လိုရော ပေငြ်းစပ် ပေးလိုဿရတယ်။ ဒီမဋ္ဋာ နမူနာ င်္ီကည့်င်္ီကည့်ပြဦး။
က္လတော် အခု လတ်တလော ပုည င်္ိမန်မာ ယူနီကုတ် စာလုံးကို သုံးထားတယ်။ ဒပြေမယ့် အခုနောက်ထ့က်လာတဲ့ ဇော်ဂ္လီ က ရိုက်လုဿိ ရတဲ့ စာလုံးအရေအတ့က် ပုညထက် ပိုစုံတယ်ဗ္လ။ ဥပမာ ပုညမဋ္ဋာ ရကောက် အတို ဘယ်လို ရိုက်ရလဲ မသိဘူး။ ဇော်ဂ္လီမဋ္ဋာ ရိုက်လိုဿ ရတယ်။ ဒပြေမယ့် ပိုကောင်းတဲ့ င်္ိမန်မာ ယူနီကုတ် ထ့က်လာမယ့် အခ္လိန်ထိ စောင့်လိုက်ဦးမယ်ဗ္လာ။ လတ်တလောတော့ သုံးလတ်စ ပုညကိုပဲ ဆက်လက် သုံးစဲ့လိုက်ဦးမယ်။ စိတ်ကူးတည့်ရင်တော့ ဇော်ဂ္လီ ငေ်္ိပာင်းသုံးမယ်ဗ္လာ။
MCF က ထုတ်တဲ့ဟာ ကောင်းလား ... အင်း ပညာရဋ္ဋင်တေ့ ရေးတာဆိုတော့ ကောင်းမဋ္ဋာပြေ့ဗ္လာ။ ဒပြေမယ့် မ္ဒြလေးကို အခုအခ္လိန်ထိ က္လတော် မရိုက်တတ်လိုဿ က္လတော့်အတ့က်တော့ အဆင်မငေ်္ိပသေးဘူး။ သူက္လတော့ တစ်မ္လြိးဗ္လ။ "င်္ိမန်" ဆိုတာ ရိုက်ခ္လင်ရင် မ အရင်ရိုက် နပီးမဋ္ဋင်္ိရိုက်ရတာ။
င်္ိမန်မာ GSM ဖုန်းတေ့ဆီကို SMS အခမဲ့ ပိုဿရအောင်
Posted by MgHla Mandalay at 1:58 pm
http://www.yangoncity.com.mm မဋ္ဋာ ယင်းတိုဿ၏ မန်ဘာမ္လား င်္ိမန်မာ GSM ဖုန်းတေ့ဆီကို SMS တစ်နေဿ5စောင် ပိုဿလိုရငေ်္ီကာင်း ယင်း website ရှဲ homepage မဋ္ဋာ ဖော်င်္ိပထားပတြယ်။
လာင်္ိပန်နပီ င်္ိမန်မာ Unicode Font အသစ်
Posted by MgHla Mandalay at 9:01 am
ဇော်ဂ္လီလိုဿ ခေတြဲ့ င်္ိမန်မာ Unicode Font အသစ်ကို www.planet.com.mm မဋ္ဋာ မိတ်ဆက်ထားတာကို ဒီနေဿ တှေ့လိုက်ပတြယ်။ ယင်း font ကို http://www.planet.com.mm/advfile.cfm?adv_name=zawgyi မဋ္ဋာ download လုပ်ယြူိုင်ပတြယ်။ ပုညထက်စာရင် ရိုက်လိုဿရတဲ့ စာလုံးအရေအတ့က်မ္လား ပိုလာပတြယ်။ အရင် ၀င်း-င်္ိမန်မာ လက်က့က် စနစ်ပုံစံ ရိုက်လိုဿရအောင် လုပ်ထားတာ တှေ့ရပတြယ်။
ယူနီကုတ် င်္ိမန်မာစာလုံးတေ့က Unicode Standard နဲဿ လုပ်ထားတယ်လိုဿ ငေ်္ိပာပေးမယ့်လည်း ပုည နဲဿ ရိုက်ထားတာကို င်္အိခား င်္ိမန်မာ ယူနီကုတ် ငေ်္ိပာင်းင်္ီကည့်ပြ။ အလားတူ င်္ိမစေတီနဲဿ ရိုက်ထားတာကိုလည်း ငေ်္ိပာင်းင်္ီကည့်ပြ။ င်္ိမန်မာ ယူနီကုတ်စာလုံးဆိုတာတေ့ကို င်္အိခား င်္ိမန်မာ ယူနီကုတ်စာလုံးမ္လားသိုဿ ငေ်္ိပာင်းင်္ီကည့်ပြ။ အဆင်ငေ်္ိပငေ်္ိပ ဖတ်ရ႙လိုဿ မရြိုင်ပြ။ အခု ထ့က်ရဋ္ဋိနေတဲ့ င်္ိမန်မာ ယူနီကုတ် စာလုံးမ္လား တစ်ခုနဲဿ တစ်ခု လက်က့က်မတူတာ အသာထား ရိုက်နပီးသား စာလုံးမ္လား ဖောင့် တစ်ခုနဲဿ တစ်ခုတောင် ငေ်္ိပာင်းင်္ီကည့်လိုဿ မရဘူးဆိုတော့ ကဲ က္လတော်တိုဿ င်္ိမန်မာ ယူနီကုတ် ဖောင့် သုံးခ္လင်ရင် ဘယ် င်္ိမန်မာယူနီကုတ် ဖောင့်ကို standard ထားနပီး သုံးင်္ီကမလဲ။
အင်း င်္ိမန်မာတေ့ရှဲ standard က စနစ်တစ်ခုကို တစ်မ္လြိး ၁၀ ခုကို ၁၀ မ္လြိး င်္ိဖစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ကဲ ... မိတ်ဆေ့တိုဿရော ဘယ် ယူနီကုတ်ဖောင့် သုံးင်္ီကမလဲ ...?
Posted by MgHla Mandalay at 12:50 pm
မနှေညကစနပီး သန်ဘက်ခြ ည အထိ အမေ့အိမ်မဋ္ဋာ အိပ်မယ်ဗ္လား ...
အင်း ... အခုရေးတဲ့ စာလုံးတေ့ သ့ားပုပ်စော် နံနေမလား မသိ ... ဘာင်္ိဖစ်လှိုလဲ ဆိုတော့ သ့ားတိုက်တံ မေ့လာင်္ီကလှို မနက်က ဆားနှဲပဲ သ့ားတိုက်ခဲ့ရတယ်လေ ...
ကောင်းသော နှေလည်ခင်းပြ ...
Posted by MgHla Mandalay at 3:54 pm
ရန်ကုန်သားတေ့ DreamTV င်္ီကည့်လှို ရတယ်ဆိုတဲ့ စလောင်းအခ္လပ်နှဲ ဖမ်းစက် ၀ယ်မလှိုလား ...
မညြလေးမဋ္ဋာ ခေတ်စားတာ အတော်င်္ီကာနပီင်္ိဖစ်တဲ့ ဖီလစ်ပိုင်ြိုင်ငံမဋ္ဋ ထုတ်လ္တွင့်တဲ့ အခပေး ရုပ်သံလိုင်းမ္လားပဝြင်တဲ့ DreamTV ကို ၂-စလောင်းခ္လပ် မ္လားကို အသုံးင်္ိပနြပီး ဒိုင်နာဆက်၊ မီတာဆက် အစရဋ္ဋိသော စလောင်းဖမ်းစက်မ္လားင်္ိဖင့် အခမဲ့ င်္ီကည့်ရ႙လှို ရနေသည်မဋ္ဋာ ဋ္ဋြစ်တော် င်္ီကာနပီင်္ိဖစ်ပတြယ်။ မညြလေးမဋ္ဋာ ယင်း ၂-ပေ စလောင်းအခ္လပ်ဋ္ဋြင့်ဖမ်းစပ်အပအြ၀င် စက်တန်ဖိုးဋ္ဋြင့် တပ်ဆင်ခ အနပီးအစီးမဋ္ဋာ ၁ သိန်း သုံးသောင်း ၀န်းက္လင်သာ ကုန်က္လငေ်္ီကာင်း သိရပတြယ်။
ယင်း ဖမ်းစက်မ္လားသည် တစ်ခတြစ်ရံ ကုဒ်ပ္လောက်သည်မ္လား ရဋ္ဋိတတ်နပီး ခ္လစ်ပ်င်္ိပန်ထည့်င်္ရိခင်း၊ ဆော့ဝဲလ် င်္ိပန်ထည့်င်္ရိခင်းမ္လြိးမ္လား င်္ိပလြုပ်ရတတ်ပသြည်။
ယခု ရန်ကုန်တ့င် ဒိုင်နာဆက်ကုမ္ဏဏီထုတ် ၁၀-ပေ စလောင်းအခ္လပ်ဋ္ဋြင့် ဒိုင်နာဆက်ဖမ်းစက်မ္လားင်္ိဖင့် ယင်း DreamTV ကို ဖမ်းယူ င်္ီကည့်ရ႙ ရြိုင်နပီင်္ိဖစ်ငေ်္ီကာင်း ဂ္လာနယ်မ္လားတ့င် ငေ်္ီက်ာင်္ိငာ တေ့ဿရဋ္ဋိရပသြည်။ DreamTVမဋ္ဋ ထုတ်လ္တွင့်သော ရုပ်သံလိုင်း အစီအစဉ်မ္လား ကောင်းပသြည်။၂၀၀၆ ဋ္ဋြစ်ဦးပိုင်းတ့င် ပိုင်ရဋ္ဋင် အငေ်္ိပာင်းအလဲ ရဋ္ဋြိုင်ငေ်္ီကာင့် တ့က်ခ္လက်နပီးမဋ္ဋ ၀ယ်ယူသင့်ပငြေ်္ီကာင်းဋ္ဋြင့် သုံးသိန်းခဲ့လောက် နှဲ ဘာမဋ္ဋ င်္မိဖစ်သ့ားဘူးဆိုရင်တော့ ၀ယ်ပြ။ ဒမြဋ္ဋမဟုတ် ၀ယ်ခ္လင် လ့န်းအားရကီးလှူင်လည်း ၀ယ်ပြ။
DreamTV မရတော့လှူင်လည်း ယင်းဖမ်းစက်မ္လား အသုံးင်္ိပနြပီး ၈-ပေ စလောင်း တပ်ဆင်ပကြ Free to Air လိုင်းမ္လား င်္ီကည့်ရ႙ရြိုင်သေးငေ်္ီကာင်းပြ။
Posted by MgHla Mandalay at 9:39 am
Posted by MgHla Mandalay at 2:55 pm
ဒ-ဒေ့း ပေအြောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ... ဆိုတာ မသိသူတေ့ ...
Myanmar Unicode Font သုံးထားရင် ဖိုင်နာမည်တေ့၊ fol...
Windows 2003 မဋ္ဋာ login လုပ်စရာမလိုဘဲ Shutdown လုပ်...
ရန်ကုန်သားတေ့ DreamTV င်္ီကည့်လှို ရတယ်ဆိုတဲ့ စလောင်း...
e-Book မ္လားကို စ္လေြး႙န်း သက်သာစ့ာင်္ိဖင့် စာအုပ်င်္အိဖစ်...